Stawberry Milk Shake | Colourful Recipes
← Baked Cornish Hen
Stawberry Milk Shake
စတော်ဘယ်ရီ နှင့် နွားနို့ကို မွှေစက် ဖြင့် မညက်တညက် (စတော်ဘယ်ရီ လက်ဖျော် အနေအထား) မွှေပါ။
ခဏလောက် မွှေလိုက်ရင် စတော်ဘယ်ရီ လက်ဖျော် အနေအထား စတော်ဘယ်ရီ မညက် တညက် ရပါမည်။
ခွက်ထဲကို စတော်ဘယ်ရီ အရင်ထည့် …
ဒိန်ချဉ် ထည့် ….
နို့ဆီ များများ …..
မမွှေခင် အနေအထားလေး ….
ဇွန်း ဖြင့် မွှေအပြီး ….
By Thet Nandar • Posted in Milk Shake	• Tagged စတော်ဘယ်ရီ, စတော်ဘယ်ရီ မစ်ရှိတ်, စတော်ဘယ်ရီ ဖျော်ရည်, colourful recipes blog, condensed milk, dessert, food, milk shake, sour cream, stawberry, stawberry milk shake
2 comments on “Stawberry Milk Shake”
September 23, 2012 @ 9:57 pm
Stawberry milk shake looks Yummy! I don’t like eating stawberry but it looks great in picture of stawberries in this post are uttery interesting, unique and beautiful. Stawberry milk shake looks too good to drink.
September 24, 2012 @ 4:43 pm
Yummy! love to drink.
LeaveaReply to Ruthina Cancel reply